Ny teknôlôjia amin'ny famolavolana vy
Ny teknikan'ny fanamainana Triangle mampiasa lelafo entona dia ampiasaina hanimba ny lovia vy amin'ny fanamboarana sambo. Na izany aza, amin'ny fizotran'ny fanafanana ny lelafo dia matetika sarotra ny mifehy ny loharanon'ny hafanana ary tsy azo ovaina endrika tsara ny ampahany. Amin'ity fanadihadiana ity dia novolavolaina ny maodely isa mba handinihana ny teknikan'ny fanafanana ny telozoro miaraka amin'ny loharano hafanana azo fehezina bebe kokoa amin'ny hafanana avo lenta ary hamakafaka ny fiovaovan'ny takelaka vy amin'ny fizotran'ny fanafanana. Mba hanamorana ny làlan-kizorana marobe amin'ny teknikan'ny fanitarana ny telozoro dia soso-kevitra momba ny làlam-pandrefesana ary avy eo omena maodely fampidirana hafanana boribory 2-ref. Ny fandehanan'ny hafanana sy ny fihenan'ny transverse amin'ny takelaka vy mandritra ny fanafanana ny telozoro miaraka amin'ny hafanana fampidirana dia dinihina. Ny valin'ny fanadihadiana dia ampitahaina amin'ny andrana mba hampisehoana ny tsara
fifanarahana. Ny maodely momba ny hafanana sy ny maodely fandinihana thermo-mekanika naroso tamin'ity fandinihana ity dia mahomby sy mahomby amin'ny fanahafana ny teknikan'ny fanafanana telolafy amin'ny famolavolana lovia vy amin'ny fanamboarana sambo.
Sokajy Technologies Tags HF induction forming, fanatanjahan-tena avo lenta, Fanamboarana fanoratana, Fanamboarana metaly matevina Post Fikarohana
Induction Brazing Steel Tips
Fanamafisana ny tariby vy
kodiarana alim-baravarana alim-baravarana alim-baravarana alimina
Pipe HAVC manodinkodina
Seal Foil Aluminium Miaraka amin'ny Induction
Fampiharana fanesorana ny fantsom-pifandraisana RPR